I-Bothan Beag - Indlu Encane Emanzini - I-Airbnb
I-Bothan Beag - Indlu Encane Emanzini
Port Hood, Nova Scotia, i-Canada
Indlu encane ibungazwe ngu-Colin & Laura
U-Colin & Laura Ungumbungazi ovelele
Indlu yethu encane engu-25'x 8.5' itholakala endaweni enhle engasese engasese engaphambi kolwandle ePort Hood enobhishi oluseceleni nompheme obanzi.
Kukhona i-loft enombhede olingana nendlovukazi kanye nosofa endaweni enkulu ephenduka ibe umbhede wabantu ababili. Kunendlu yokugezela eyiziqephu ezi-3 ngemuva ngaphansi kwendawo ephezulu kanye negumbi lesibili elincane langasese elinesikhala esanele sokusetha i-pack n' play.
Indlu yethu encane inikeza ulwazi lweholide oluyingqayizivele futhi oluqabulayo. Alikho kugridi ngokuphelele, kodwa ngakho konke ukunethezeka okuvamile kwanoma yiliphi ikhaya. Kuyindlela enhle yokunqamula nokukhulula.
Indlu iqhwakele ngaphezu kwendawo ekahle yogu olucezile olunamatshe olutholakala kalula endleleni ephambi kwendlu. Ungase uchithe amahora uhlola i-rock beach ngezansi, ufuna ukhuni olukhukhulekayo, amadwala, izinsalela zamathambo nengilazi yolwandle noma uhambe uye ogwini olunesihlabathi, oluqhele ngamaminithi angu-5 - Lunamanzi afudumele afudumele enyakatho yeCarolinas.
Indlu yethu encane inamandla elanga, i-propane ishisa futhi amanzi atholakala ngomthombo osendaweni. Ikhishi lihlome ngokuphelele, kodwa ngenxa yokuthi sisebenza ngamandla elanga, kukhona izinto zikagesi ezimbalwa zasekhishini esizenza ngaphandle kwazo. Ngokwesibonelo, asinawo ihhavini noma i-microwave. Esikhundleni salokho, sine-cooktop eyakhelwe ku-propane. Siphinde sibe nesiqandisi esingu-3.8 cubic foot nesiqandisi esincane esihambisana nesistimu yethu sonozungezilanga futhi inkulu kakhulu ngokudla kwakho nesiphuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Kukhona indlu yokugezela eyiziqephu ezintathu eneshawa, usinki, nendlu yangasese. Izinto zokomisa izinwele nezinto zokuqondisa izinwele azikwazi ukusetshenziswa endlini encane ngoba azihambisani nesimiso sethu sonozungezilanga.
I-loft inamafasitela e-panoramic ngakho ungakwazi ukuhlala embhedeni wendlovukazi futhi ubheke olwandle. Umsindo wamagagasi aphuka ngezansi uzokulala. I-loft ifinyeleleka ngeladi elibanzi elingashintshi.
Kukhona usofa endaweni evamile oshelelayo ukuze wenze umbhede wabantu ababili. Kukhona nekamelo elincane langasese ngemuva elinenketho yokusetha iphakethe kanye ne-crib yokudlala.
Kukhona isishisi se-propane kanye nebhodwe lelobster elitholakalayo ukuze lisetshenziswe endlini encane. Ungathenga ama-lobster amasha echwebeni ukuze uwapheke futhi ujabulele. Asiwavumeli ama-lobster ukuthi aphekwe ngaphakathi, kodwa sinesiqondiso kwesokunxele sendlela yokulungisa isidlo sakho sakusihlwa sakusihlwa endlini encane.
Indlu encane ithokomele futhi inethezekile futhi iyindawo ekahle yokubaleka eholidini lakho.
4.99 · 179 okushiwo abanye
Indlu encane itholakala endaweni enhle, yangasese yangaphambili yolwandle. Kukhona ulwandle oluzimele olunamadwala olutholakala ngaphansi kwendlu futhi lutholakala kalula ngendlela enakekelwa kahle. Ulwandle luhle kakhulu ukuze ulihlole.
Ulwandle oluhle olunesihlabathi lutholakala kuhambo lwemizuzu emi-5 futhi lunamanzi afudumele enyakatho yeCarolinas.
Idolobha lasePort Hood liyikhaya lamabhishi anesihlabathi amahle angu-5. Iphinde ibe nezinsiza eziningi ezinhle ezihlanganisa igrosa, igalaji likaphethiloli, i-take out chip wagon, indawo yokudlela/i-pub yokuhlala enokuzijabulisa okubukhoma ngobusuku obuthile, isitolo sezingxenyekazi, isitolo sotshwala, nengobo ka-ayisikhilimu. Kukhona futhi iphawundi le-lobster e-Warf elithengisa ama-lobster amasha. Iphawundi le-lobster liwuhambo lwemizuzu emi-2 ukusuka endlini encane!
I-Port hood iyisizinda esihle sasekhaya noma indawo yokuqala yokuhlola i-Cape Breton Island. Kukhona izinto eziningi ongazibona futhi uzenze kanye nezindawo ongazihlola.
Ibungazwe ngu-Colin & Laura
UColin & Laura Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Port Hood namaphethelo